Uvalelwe "kwimeko yoogqirha." Uluhlu luhlaziywa. VIDEO - HienaLouca
Uvalelwe "kwimeko yoogqirha." Uluhlu luhlaziywa. VIDEO
Kwimeko yokusetyenziswa kakubi kwamagosa avela kwishishini lonyango sele likhulu kunezithuba ze-60, i-37 yazo ivalelwe, yavuma Usihlalo weKomiti yoKhuseleko kaRhulumente Valery Vakulchik.
Amanani ahlawuliswa ngokukhwabanisa nokuhlaselwa irhafu, kubandakanywa nokuthengwa kwezixhobo kunye namachiza kumaxabiso athathwe kwi-60-100%.
I-KGB ithi malunga phantse wonke umntu avume ukuba netyala. U kuphanda wahamba Umphathiswa wezeMpilo weBelarus, uSekela-Mphathiswa UVasily Zharko.
(Inkcazelo kungqinwe KGB)
USekela Mphathiswa wezeMpilo Igor Lositsky;
UMlawuli oyiNtloko we "Belpharmacy" Vyacheslav Gnizov;
UMlawuli we "Belmedtekhiniki" Alexander Sharak;
INtloko yolawulo lwezobugqirha beSebe lezoKhuseleko UAlexey Eskov;
INtloko yeCandelo loMlawuli oyiNtloko wezeMpilo kwiKomiti yoLawulo lwe-Oblast ye-Grodno Andrey Strizhak;
I-pathologist oyiNtloko yeSebe lezeMpilo, intloko ye-Minsk City Clinic Pathology Anamnesis Bureau Arkady Puchkov;
UMlawuli weZiko loLwazi kunye noVavanyo kwiNkcazo yeMpilo Alexander Stolyarov;
UMlawuli weziko leTraumatology kunye neOthopathiki Alexander Beletsky;
UMgqirha weNtloko weSibhedlele saseXnumX City Clinic eMinsk Oleg Fomin;
Ugqirha oyiNtloko weZiko leRiphabhuliki yoLungiso lweZonyango kunye neCalneal Treatment USergey Korytko;
UMlawuli weenkampani "Exon" Valery Vaskevich.
(ulwazi lweendaba malunga nokugcinwa kungagcinwanga)
UMlawuli we-"Ismamed" nkampani USergey Shakutin;
INtloko yeSebe le-Endoscopic ye-9 City City Hospital Andrey Savchenko.
Iimeko zobugebengu ziqinisekisiweyo
(kodwa awaziwa ukuba ba valelwe)
UMgqirha weNtloko we-9 City City Hospital Hospital Valery Kushnirenko;
Ugqirha oyiNtloko kwisibhedlele seMinsk Hospital Clinic Andrey Korolko;
IGqirha oyiNtloko yeSibhedlele seZibhedlele saseVitebsk Anatoly Oladko.
Ngokonke, "ngaphezulu kwe-15 000 000" yabanjwe okanye ihlawulwe kwimeko, i-KGB iyasithi.
Lositsky - «ukusuka kwi-$ 2500 ukuya ku-$ 10 000»;
Vaskevitch - "uvalelwe xa ufumana i-$ 5000, ubuncinane i-$ 25 000";
I-Fomin - "ifumaneka nge $ 140 000";
Iimitha - "ezingekho ngaphantsi kwe-$ 200 000";
I-Beletsky - "malunga ne-500 000" ifunyenwe kwii-caches;
I-Sharak - "kwisitoreji kwigaraji efumane i $ 620 000."
Igolide yaseBelarus kunye neendawo zokutshintshiselana kwamanye amazwe zancitshiswa malunga nesiqingatha sezigidigidi zeedola
Kwi-2019, i-US ingaba yinkokeli yehlabathi kwimveliso yeoli
UDmitriev, uKostusev noNikolyuk malunga nokuba i-Belarusiya idinga "isandla esomeleleyo"
I-blogger yaseGomel yayinaso ixesha lokumangalela ngenkohliso ngefomu lamaNazi
Namhlanje: umhla wokuzalwa kaGennady Buravkin
Post Previous:Umtshali-zimali waseUkraine uqinisekisa ukurhoxiswa kwesityalo se-Orsha, esizwe eBelarus
Okulandelayo Post:Ummeli u-Kurapat: Umkhosi we-militiaman-Akrestin waboshwa waza waboshwa ngokuxhasa ababhikishi